News | रक्तदान
News | Tag: रक्तदान
स्वास्थ्यकर्मी, सेना र प्रहरीको भरमा रक्तदान
जाजरकोट । ब्लड बैंक नहुँदा कर्णाली प्रदेशका दुर्गम जिल्लामा अधिकांश सुत्केरी महिलाको ज्यान चिकित्सक, सेना र प्रहरीले रगत दिएर बचाउने गरेका छन् । अपर्याप्त उपकरण र जनशक्ति बीचका यहाँका चिकित्सले उपचार गरी बिरामी बचाउन रक्तदानसमेत गर्दै आएका छन् ।
नोबेल साकोस साहित्यिक संस्था
काठमाडौँ । ‘नोबेल साकोस साहित्यिक संस्था’ले आज आयोजना गरेको आकस्मिक रक्तदान कार्यक्रममा २१ जनाले रक्तदान गरेका छन् । सुरक्षित रुपमा लकडाउनका सबै मापदण्ड पूरा गरी प्राज्ञ उषा ठाकुर तथा पूर्वराजदूत डा रामभक्त ठाकुरको उपस्थिति र साकोसका अध्यक्ष सरस्वती गौतमको संयोजकत्वमा आज संस्थाकै केन्द्रीय कार्यालय कामपा–२९ घट्टेकुलो (निजी निवास)मा आयोजित उक्त रक्त सङ्कलन कार्यक्रमलाई प्राविधिक रुपमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी भक्तपुर तथा ब्लोदान काठमाडौँका सचिव एवं डोर टु डोर रक्त सङ्कलनका संयोजक अनिलरत्न तुलाधरको सहयोग रहेको थियो ।
रक्तदान गरेको तीन महिनापछि मात्र पुनः रक्तदान गर्न सकिन्छ । गर्भवती, ६ महिना नपुगेका सुत्केरी र महिनावारी भइरहेका अवस्थामा रक्तदान गर्नुहुँदैन ।
कस्तो ब्यक्तिले रक्तदान गर्नुहुँदैन ?
– विशेष पेसा भएका ब्यक्ति अर्थात मेसिनरी काम गर्ने ब्यक्ति, जस्तै पाइलट, ड्राइभर, अस्पताल अर्थात अन्य क्षेत्रमा मेसिनमा काम गर्ने ब्यक्तिहरुले रक्तदान गर्नसाथ काममा जान मिल्दैन । उनीहरुले केही समय आराम गर्नुपर्छ ।
रगतकाे लागि सेना, प्रहरीकै भर
सप्तरी । राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा प्रत्येक दिन रगत दिनुपर्ने बिरामी भर्ना हुन्छन् । अस्पताल परिसरमा रक्त सञ्चार केन्द्र (ब्लड बैंक) छ तर, प्रायः रगतको अभाव रहन्छ ।
सैनिकको रगतले बचायाे मृत्युकाे मुखमा पुगेकी गर्भवतीकाे ज्यान
राजविराज । ‘एबी नेगेटिभ’ रगतको अभावमा जीवन र मृत्युको दोसाँधमा पुगेकी एक गर्भवतीलाई सैनिकको रगतले बचाएको छ ।
के तपाईले रक्तदान गर्नु भएको छ ? यस्ता छन् रक्तदानका आश्चर्यजनक फाइदा !
काठमाडौं । केही मानिसमा कस्ता व्यक्तिले रक्तदान गन सक्छ ? रक्तदान गरेपछि शरीरमा अन्य प्रभाव पर्छ कि भन्ने डर हुन्छ। तर त्यस्तो केही हुँदैन। महादान मानिने रक्तदानले शरीरको स्वास्थ्यका लागि आश्चर्यजक फाइदा गर्छन्।
कुकुरले गर्‍यो दर्जनौं पटक रक्तदान
काठमाडौँ । मानिसले त एकसय पटक भन्दा बढी समय रक्तदान गरेको समाचार आउने गर्छ तर ककुरले पनि दर्जनौं पटक रक्तदान गरेर धेरैको ज्यान बचाएको सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ ।
मुलुकमा देखिएको रक्त अभाव कम गर्न मुलुकभर सशस्त्र प्रहरीको रक्तदान
काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले मुलुकमा देखिएको रक्त अभाव कम गर्न मुलुकभर रहेका सङ्गठनमा आज अभियानका रूपमा रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।